Raw URB597 (546141-08-6) HPLC ≥98% | Ahibena mpanadio AASraw
/ Products / Vokatry ny vinaingitra / URB597
Rating: Sokajy: Vokatry ny vinaingitra Tags: buy URB597, URB597, URB597 for sale, Mpamatsy URB597
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny famokarana maimaim-poana avy amin'ny gram amin'ny filaharan'ny URB597 (546141-08-6), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
URB597, izay fantatra amin'ny anarana hoe KDS-4103, dia singa mahery sy azo tsindriana ao amin'ny hydrolase amidin'ny amine (FAAH), enzymin'ny kônalisaly ny hydrolysis ao amin'ny endocannabinoid anandamide, miaraka amin'ny soatoavin'ny 50% fihenan'ny IC50 concentration of 4.6 nM sy 0.5 nM ao amin'ny atidoha membranes sy ny mikrosom-biby mikraoba. Ny URB597 dia mampiseho ny vokatry ny anxiolytika, antidepresspressant, ny antinociceptive ary ny aretin-koditra ao vivo raha tsy miteraka famantarana hafa mifandray amin'ny connecter cannabinoid.
Karazana fototra I.URB597:
Formula Molecular: C20H22N2O3
Meny fitetezana 338.4
Synonyms: N-cyclohexylcarbamic acid 3 '- (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester; 3'-CarbaMoyl- [1,1'-biphenyl] -3-ylcyclohexylcarbaMate; 3- (3-carbaMoylphenyl) phenyl N-cyclohexylcarbaMate Ny karbaMic acid, N-cyclohexyl-, 3 '- (aMinocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester KDS 4103 N-Cyclohexylcarbamic acid 3' - (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester ; N-cyclohexylcarbamic acid 3 '- (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester URB 597 KDS 4103; URB 597,> = 98%; APD597 (URB597)
Melt Point: 155-157 ° C
Alpha: D + 5 ° (c = 0.437 amin'ny chloroform)
Solitany DMSO: soluble2mg / mL, mazava (mafana)
II. Fampiasana URB597 amin'ny famokarana:
2.How ny asa ho URB597?
Fanoloran-tena: Ny fiahiana ara-pahasalamana lehibe amin'ny fampiasana agonista mivantana cannabinoid 1 (CB1) dia mampitombo ireo fitambaran'ireo toaka fisotroan-dronono sy fihetsika mifandraika amin'ny zava-mahadomelina. Amin'ny fomba hafa, ny CB1-fandraisana andraikitra azo avy amin'ny fandraisana andraikitra dia azo atao amin'ny fampitomboana ny dipoavatra anandamide amin'ny fampiasana ny hydrolase asidrahydride (FAAH). Tanjona: Amin'ny fampiasana ny inhibitor FAA URB597 voafantina, dia nanadihady isika raha toa ka mihabetsaka ny fihenan'ny alikaola amin'ny fihenan'ny tonon-kônabônida, toy izay mitranga amin'ny mpandidy CB1 mivantana. Fitaovana sy fomba: URB597 dia notsaboina tamin'ny fitantanana ny fisotroan-toaka tao amin'ny Wistar ratos ary ny fisotroan-toaka natokan'ny alikaola tamin'ny fisotroana marary sardiniana sardiniana (msP). Ao amin'ny fombam-pitenenan'i Wistar, ny vokatry ny URB597 dia nahitana ny fiantraikany amin'ny fisotroana toaka sy ny tebiteby-, ary ny fampiasana azy ireo hohimbine- ary ny fitsaboana amin'ny alikaola. Ho fampitahana, dia notsapaina koa ny vokatr'ilay mpanohitra mpanohitra ny CB1 rimonabant amin'ny ethanol. Vokatr'izany: teo ambany fitantananay, ny fitsaboana URB597 (0.0, 0.3 ary 1.0 mg / kg) dia tsy nampitombo ny fisotroan-dronono an-tsokosoko tao amin'ny MSP na ny fihenan'ny fihenam-bidy 1 sy ny fizotran'ny alikaola ao amin'ny Wistars izay tsy voafidy. Ao amin'ny fitsapana indray, dia tsy nisy fiantraikany teo amin'ny valim-panafody, ny fihenjanana an-tongotra sy ny fiverenan'ny lozam-pifamoivoizana. Mifanohitra amin'izany, ny URB597 dia nanala tanteraka ny valin'ny anxiogenic izay norefesina nandritra ny fisintonana taorian'ny fanafihana IP (3.0 g / kg). Rimonabant (0.0, 0.3, 1.0 ary 3.0 mg / kg) dia nampihena tokoa ny fitantanana ny ethanol. Famaranana: Ny vokatra dia mampiseho fa ny fampiatoana ny rafitra anandamide endazannoidana amin'ny alàlan'ny fisintahana ny FAAH dia tsy mampitombo ny risika amin'ny fisotroana toaka fa mampihena ny ahiahy mifandray amin'ny fisotroana alikaola. Noho izany dia afaka manombantombana isika fa ny fanafody mifototra amin'ny fampiasana ny endocannabinoid modulators toy ny URB597 dia mety manome tombontsoa lehibe raha oharina amin'ny fitsaboana amin'ny mpikatroka CB1 mpikatroka.
3.Is effects URB597?
Ny voka-dratsin'ny URB 597 irery sy miaraka amin'ny anandamide dia nodinihina tamin'ny andian-jiolahy (n = 4) izay nanavakavaka ny fiara XDUMX-THC (9 mg · kg-0.1 iv) avy amin'ny fiara, ary ao amin'ny vondrona hafa (n = 1) (5 mg · kg-9 h-1 sc), izay nanavakavaka ny rimonabant mpanohitra cannabinoid (112 mg · kg-1 iv).
4. Fanampiny torolalana:
Ny URB 597 dia nanatsara ny vokatry ny fitondrana anandamide fa tsy ny agonista CB1 hafa. Na izany aza, ny URB 597 dia tsy nanatsara ny fiakaran'ny vidin'ny Δ9-THC nampidirin'ny anandamide. Samy milaza fa ireo tahirin-kevitra ireo dia maneho fa ny anandamide endogenom ao amin'ny atidoha ambony dia tsy mamaly mora foana ny vokatry ny fitondran-tena amin'ny fampiasana anandamide.
Ny tebiteby sy ny selekta dia ny asidra hydrolase (FAAH) amin'ny inhibitor (ny IC50 ny soatoavina dia 3 sy 5 nM amin'ny atin'olombelona sy ny atidoha). Maneho tsy misy fihetsika tsy mivoatra manoloana ireo karazana receptors, kanôsy ion sy enzymes, anisan'izany ny mpitsabo cannabinoid olona sy ny lipase monoacylglycerol rat. Mampiseho ny asan'ny antiallodynika sy ny antihyperalgesika amin'ny modely fanaintainana. Ao amin'ny vitro, ny KDS-4103 dia manakana ny asan'ny FAAH amin'ny fampihenana ny tsindrona medika (IC (50)) amin'ny 5 nM ao amin'ny atidoha membranes sy ny 3 nM amin'ny mikrosom-bovoka. Ao amin'ny vivo, ny KDS-4103 dia manakana ny asan'ny ratin'ny FAAH aorian'ny fampidirana intraperitoneal (ip) amin'ny dian-tsindrona medika (ID (50)) amin'ny 0.15 mg / kg. Ny votoatiny dia tsy mifamatotra tanteraka amin'ny tanjona hafa mifandraika amin'ny cannabinoid, tafiditra ao anatin'izany ny mpikirakira cannabinoid sy ny fitaterana anandamide, na amin'ny tambajotra lehibe avy amin'ny receptors, channel ion, transporters ary ny enzymes. Amin'ny fampiasana IP ny hoditra sy ny totozy KDS-4103 dia miteraka zava-mahadomelina manan-danja, anxiolytika, toy ny antidepressant ary toy ny fanafody, izay tsy voasariky ny fitsaboana amin'ny mpanohitra mpanohitra CB1. Mifanohitra amin'izany, amin'ny doka izay manakana ny fihetsika ataon'ny FAAH sy ny mampitombo ny haavon'ny anandamide ao amin'ny atidoha, ny KDS-4103 dia tsy manambara ny fiantraikan'ny cannabinoid (toy ny catalepsy, ny hypothermie, ny hyperphagia), tsy mahatonga ny toerana ho an'ny toerana, ary tsy mamokatra amin'ny ankapobeny Ny vokatry ny fanavakavahana ny cannabis active, Delta9-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC). Ireo fikarohana ireo dia milaza fa ny KDS-4103 dia manatsara ny fihetsika ataon'ny tononkalo amin'ny anandamide ao amin'ny subset of receptors CB (1), izay mety amin'ny ankapobeny dia mifantoka amin'ny fifehezana ny fihetseham-po sy ny fanaintainana. Ny KDS-4103 dia hita ao amin'ny ratina sy ny gidro cynomolgus. Ny fianarana dose miverimberina matetika (1,500 mg / kg, isan-tsokajiny) amin'ireo karazana roa ireo dia tsy nampiseho fanodikodinam-bokatra. Tahaka izany koa, tsy misy tosika ny voan'ny tosika amin'ny bakteria fitsaboana cytotoxicity bakteria amin'ny vitro sy ny test de Ames. Ankoatr'izany dia tsy nisy ny tsy fahampiana natao tamin'ny raty tamin'ny fitsapana rotarod taorian'ny fitsaboana nahazatra IP tamin'ny KDS-4103 amin'ny doses hatramin'ny 5 mg / kg na amin'ny bateria mahazatra amin'ny fikarakarana arakaraky ny dosie am-bava ka hatramin'ny 1,500 mg / kg. Ny vokatra dia maneho fa ny KDS-4103 dia hanolotra fomba amam-panao amin'ny endrika varavarankely tsara ho an'ny fitsaboana ny tebiteby, ny fahaketrahana sy ny fanaintainana.
Ho an'ny lamina lehibe kokoa (Ao anatin'ny 1kg) dia azo alefa amin'ny andro momban'ny 3 aorian'ny fandoavana.
6. URB597 Recipes:
IV. Ahoana ny hividianana URB597 avy any AASraw?
Eritrereto ny bilaogin'ny vokatrao tianao indrindra:
Ahoana ny fampiasana Clenbuterol ho an'ny fatiantoka Inona no nandrodana ny vovoka nampiasaina / nandrolone tombontsoa?
More detail about products,tongasoa eto.
Aoka ho voalohany hijerena ny "URB597" hanafoana ny valin-
Garcinia cambogia dia mamoaka vovoka
Cytomel (T3) vovoka
Nootropics vovoka (17)
R & D Reagents (33)
Anabolika Steroids (48)
Nandrolone Poids Series (10)
Serasera testosterone volo (14)
Hormones vehivavy (22)
Estradiol poids Series (8)
Hormonal Enhancing Sex (15)
Fampiasan'ny lehilahy (6)
Vokatry ny vinaingitra (33)
Ny hafa (11)
09 / 12 / 2018 Dr. Patrick Young19
09 / 01 / 2018 Dr. Patrick Young11
01 / 27 / 2018 Dr. Patrick Young9
Buy Clenbuterol Raw Material safely online
11 / 19 / 2017 Dr. Patrick Young4